News Collection: समलिंगी सेक्स : प्राकृतिक कि अप्राकृतिक
यही दुई आदेश र चुनौतीबीचको टकरावले अहिले समलिंगी सेक्सको बहसले भारतमा चर्को विवाद सिर्जना गरेको छ। विवाद जारी छ।
यसैबीच १६ फेबु्रअरीका दिन सुप्रिम कोर्टमा चलेको बहसमा कोर्टले अर्को एउटा प्रश्न गर्‍यो, 'अप्राकृतिक सेक्सको परिभाषा के हो? र, कसले यसको परिभाषा तय गर्छ? समलिंगी सेक्स स्वाभाविक हो या प्रकृतिको विरुद्ध? यिनै फैसला र वादविवादले भारतमा एउटा नयाँ बहसको सुरुआत गरेको छ। अप्राकृतिक सेक्सको परिभाषा र दायरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसबारे भारत सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यद्यपि भारतीय सरकार पनि एउटा वक्तव्यले गर्दा यो विवादमा फसिसकेको छ। अदालतमा बहस चलिरहँदा अतिरिक्त सलिसिटर पिपी मल्होत्राले सरकारका तर्फबाट भनेका थिए, 'विदेशीको देखासिकी गर्दै समलैंगिकतालाई कानुनी मान्यता दिनुहुँदैन, समलैंगिक सेक्स पूर्णता अप्राकृतिक सेक्स हो।' मल्होत्राको यही बयानबाजी पछि यो विवादमा भारतीय सरकार पनि मुछियो। यद्यपि चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि पिपी मल्होत्राको भनाइ आधिकारिक नभएको भन्दै सरकार आफ्नो बचाउमा जुटेको छ। हाइकोर्टको फैसलालाई लिएर भारतको विभिन्न ठाँउमा असन्तोष फैलिएको छ, जब कि समलैंगिक अधिकारका लागि संघर्षरत संस्थाहरूले यसलाई आफ्नो विजयको रूपमा लिएका छन्।
समलिंगी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र वा बाहिर कानुनतः सेक्स वा आफूखुशी विवाह गर्न पाउने कानुन नेपालमा पनि छैन। नेपालको कानुन र समाजले समलिंगी सेक्सलाई अप्राकृतिक नभनेे पनि यसलाई सहज स्वीकार गरेको अवस्था छैन।
नेपाल र भारतबीच समलिंगीसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा अलि फरक छ। नेपालमा पनि थुप्रै कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता छन्, तर भारत वा दक्षिण एसियामा समलिंगी समुदायको समस्या झन् जटिल र दयनीय छ।
प्रचलित संविधानमा समानताको हक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकविरुद्ध रहेकाले समानताको हक माग गर्दै नीलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त लगायतका पहिचानमा आधारित अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका तर्फबाट चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिटको सुनुवाई गर्दै समलिंगी समुदायको पक्षमा २१ डिसेम्बर २००७ मा सर्वोच्चले सरकारलाई एउटा आदेश दिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो, 'विभेदविरुद्धको कानुनलाई सकारात्मक बनाऊ र समलिंगी विवादबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाऊ।'
सर्वोच्चको आदेशअनुरूप सरकाले सुनिलबाबु पन्तको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय लैंगिक तथा अल्पसंख्यक अधिकार पहिचानका लागि समिति गठन गरेको थियो। गठन भएको झन्डै पाँच वर्ष भइसक्दा पनि अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई समलिंगी समुदायले ऐतिहासिक विजयका रूपमा लिएका थिए। 'सर्वोच्चको आदेशपछि हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भयो,' नीलहिरा समाजका सचिव रोशन महतोले भने।
भारतमा समलिंगी सेक्सलाई अप्राकृतिक भनिए जसरी नेपालमा सरकारीस्तरबाट त्यस्तो आरोप खेप्न नपरे पनि दैनिक जीवनयापनका क्रममा अन्यबाट गरिने व्यवहारमा चुनौती भने कम छैन। नीलहिरा समाजका सचिव रोशन महतोले बासका लागि काठमाडौँको लाजिम्पाटमा कोठा खोज्दा पाएनन्। 'समलिंगी भएकै कारण मैले भाडामा कोठा पाइनँ,' उनले भने। समलिंगी पहिचानलाई समाजले स्वीकार गरिनसकेकोले राजधानीमा अरूभन्दा आफूहरूलाई बासको समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
समलिंगी सेक्सलाई लिएर प्रहरी छापा र केरकार पनि कम्ती छैन। 'होटेलमा सेक्सको उद्देश्यले नजाँदा पनि प्रहरीको केरकार सहनुपर्ने अवस्था छ,' महतोले भने, 'समलिंगी सेक्सका लागि सुरक्षित ठाँउ नै भएन।' सामान्य महिला पुरुषभन्दा समलिंगीमा सेक्स चाहना बढी हुने गरेको उनको अनुभव छ। 'सेक्स चाहना अत्यधिक भए पनि अन्य महिला/पुरुष जतिको सेक्स आनन्द लिन हामीलाई सहज छैन,' महतोले भने। शारीरीक बनावट र सेक्सुअल चाहना फरक भएर समाजले समलिंगी सेक्सलाई पचाइनसकेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो।
पुरुषले पुरुषलाई र महिलाले महिलालाई मन पराएर सेक्स पार्टनरका रूपमा चयन गर्ने चलनलाई सम वा तेस्रोलिंगी भनेर बुझ्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा समलिंगी/तेस्रोलिंगीलाई एलजिबिटी-लेस्बियन महिला समलिंगी, गे-पुरुष समलिंगी, बाइसेक्सुअल-उभयलिंगी सम्बन्ध, ट्रान्सजेन्डर-बहुलिंगी सम्बन्ध भनिन थालिएको छ। यौन सम्बन्धका लागि परस्पर आकर्षित हुने एउटै लिंगका व्यक्तिलाई समलिंगी भनिन्छ। यीमध्ये पुरुषप्रति आकर्षित हुने पुरुषलाई पुरुष समलिंगी अर्थात् 'गे' र महिलाप्रति आकर्षित हुने महिलालाई महिला समलिंगी अर्थात् 'लेस्बियन' भन्ने गरिन्छ। पुरुष समलिंगीहरूको संस्था 'नीलहिरा समाज'ले नेपालमा पुरुष समलिंगीहरूको संख्या करिब ७० हजार रहेको बताएको छ। तर, महिला समलिंगीहरूको यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन।
राजधानीमा पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर मितिनी नेपालले उपत्यकाका १२ सय महिला समलिंगी आफ्नो सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएको थियो। जसमा सरकारी-गैरसरकारी सेवा, शिक्षा, खेलकुद, फिल्म, संगीत, साहित्य आदि धेरै क्षेत्रका महिला रहेको मितिनी नेपालको दाबी थियो। खासमा सबै खुलेर आउनै चाहँदैनन्। किनभने आफू समलिंगी भएको कुरा खोलेपछि उनीहरूले घर-परिवार र समाजको अपहेलना सहनुपर्ने हुन्छ। उसो त सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा समलिंगी महिलालाई कारबाही गरिँदा कहिलेकाहीँ 'नैतिक चरित्र ठीक नभएको' भन्ने आरोप लगाउने गरिएको उदाहरण पनि भेटिएका छन्।
नेपालमा पहिलोपटक समलिंगी विवाह गर्ने चिजा र मीराको असफल प्रयासपछि लामो समयसम्म नेपाली समलिंगी महिलाहरू खुलेर देखा परेनन्। करिब सात वर्षअघि मात्रै नीलहिरा समाजको सम्पर्कमा आएका हेटौँडाका मीरा बज्राचार्य र लक्ष्मी घलान खुला भए। वर्षौँदेखि यौन साथीका रूपमा बस्दै आए पनि नीलहिरा समाजको सम्पर्कमा नआएसम्म उनीहरूलाई 'समलिंगी' वा 'लेस्बियन' के हो थाहै थिएन। यसरी कतिपयले थाहा नपाएर अनभिज्ञ छन् भने कतिपय त थाहा पाएर पनि घरपरिवार र समाजको डरले लुकेर बस्न बाध्य छन्।
थुप्रैले आफ्नो त्यस्तो सम्बन्ध भएको रहस्य खुलेपछि परिवार, समाज र राज्य सबैतिरबाट अस्वीकृत पनि हुनु परेको दृष्टान्त छ। तर राज्य र समाजको यत्रो तिरस्कारबीच पनि अहिले धेरैलाई अचम्म पार्दै महिला समलिंगीहरू एकपछि अर्को जोडी सार्वजनिक हुने साहस गरिरहेका छन्। करिब एक सय जति लेस्बियन जोडीले औपचारिक/अनौपचारिक विवाह गरिसकेका छन्। तर विभिन्न प्रकारका कष्ट सहनुपरे पनि महिला अधिकारवादी तथा मानव अधिकारवादीहरूले खासै सहयोग नगरेका उनीहरूको गुनासो भने कायमै छ।
नेपालमा समलिंगी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता र सामाजिक स्वीकृति छैन। त्यसैले अधिकांश समलिंगी महिला लुकीछिपी बस्न बाध्य छन्। 'सेक्स पार्टनरका रूपमा सँगै बस्दै आएका महिला/महिला वा पुरुष/पुरुष साथीलाई नेपालको कानुनले विवाह गर्ने स्वीकृति दिएको छैन,' नीलहिरा समाजका सचिव रोशन महतोले भने। सुनिलबाबु पन्तको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बुझाउने प्रतिवेदन पछिमात्रै प्रचलित कानुनमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ।
पुरुषले पुरुष र महिलाले महिलालाई आफ्नो यौनसाथीका रूपमा चयन गर्न सक्छ भनेर सन् १९७३ डिसेम्बर १५ मै अमेरिकी मनोरोग चिकित्सा संघले घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकी मनोरोग चिकित्सा संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामो तर्क एवं वादविवादपछि समलिंगी कामुकतालाई मानसिक विकृतिको सूचीबाट हटाएर स्वाभाविक यौन सम्बन्ध र प्राकृतिक मानिसकेको भए पनि कतिपय परम्परावादी र यथास्थितिवादी दर्शन, ज्ञान एवं संस्कारबाट प्रेरित व्यक्तिहरूले पुरातन मान्यतालाई छाड्न सकेका छैनन्। उनीहरूले समलिंगी कामुकता, सम्बन्ध र प्रदर्शनलाई अप्राकृतिक, मानसिक विकृति तथा विचलनका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्। उनीहरूले समलिंगी कामुकतालाई विकृत विचलन मात्र होइन, अप्राकृतिक पनि मान्दछन्। सामान्यतया यौनिकता र यौन आकर्षणमा पुरुषका लागि महिला र महिलाका लागि पुरुष आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन्छन्। समाजमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जैविक आधारमा महिला र पुरुषबीच मात्र यौनिक र वैवाहिक सम्बन्ध हुनसक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएकाले समलिंगी मान्यताले स्थान पाउन नसकेको हो।